ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိရေး၊ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အကူအညီများ က ဒေသခံများအတွက် ပိုမိုအကျိုး ရှိ၊ အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင် » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၈
နေပြည်တော်၊ ဇန်န၀ါရီ – ၁၂
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဒေသခံများဆောင်ရွက်နိုင်သော စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ နှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံများဖန်တီးပေးခြင်း၊ နည်းပညာများ ကူညီပေးခြင်းက ဒေသခံပြည်သူများ၏ ဘ၀ရပ်တည်ရေးအတွက်ပိုမိုအကျိုးရှိ၊ အထောက်အကူပြုနိုင်ပြီး ပြည်သူလူထုကလည်း ပိုမိုလိုလားကြမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Taro KONO အားယနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော် ရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန်ဧည့်ခန်းမဆောင်၌လက်ခံတွေ့ဆုံရာတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆန်းဦး၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစော၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများတက်ရောက်ကြပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Tateshi HIGUCHI ၊ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mr. Shigeki TAKIZAKI ၊ ဂျပန်နိုင်ငံစစ်သံမှူး Col.Kei TAJIKA နှင့်တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်တိုးတက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏လွတ်လပ်ရေး အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ မှုများ၊ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် လျှောက်လှမ်းရာ၌ ဂျပန်နိုင်ငံ၏အထောက် အကူပေးမှုများ၊ အာရှဒေသကုန်သွယ်ရေလမ်းကြောင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်စဉ်များနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများ၊ နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသားများအတွက် တပ်မတော်မှအကာအကွယ် ပေးဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံကအကူအညီပေးမည့်ကိစ္စရပ်များ၊ တပ်မတော် နှစ်ရပ်အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများအားအပြန်အလှန် ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင် ပစ္စည်းများအပြန်အလှန် ပေးအပ်ကြပြီး တက်ရောက်လာကြသူများနှင့်အတူ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
နပွေညျတျော၊ ဇနျနဝါရီ ၁၂
ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး ဒသေဖှံ့ဖွိုးရေးအတှကျ ဒသေခံမြားဆောငျရှကျနိုငျသော စိုကျပြိုးရေး၊ မှေးမွူရေးဆိုငျရာ ကုနျထုတျလုပျငနျးမြား၊ အလုပျအကိုငျအခှငျ့အလမျးမြား နှငျ့ စီးပှားရေးဆိုငျရာအခွခေံအဆောကျအအုံမြားဖနျတီးပေးခွငျး၊ နညျးပညာမြား ကူညီပေးခွငျးက ဒသေခံပွညျသူမြား၏ ဘဝရပျတညျရေးအတှကျပိုမိုအကြိုးရှိ၊ အထောကျအကူပွုနိုငျပွီး ပွညျသူလူထုကလညျး ပိုမိုလိုလားကွမညျဖွဈကွောငျးဖွငျ့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျက ဂပြနျနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး H.E. Mr. Taro KONO အားယနေ့ နလေ့ယျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျော ရှိ ဇယြောသီရိဗိမာနျဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌လကျခံတှဆေုံ့ရာတှငျ ထညျ့သှငျးပွောကွားသညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး ဆနျးဦး၊ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီးညိုစော၊ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီးစိုးထှဋျနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြားတကျရောကျကွပွီး ဂပြနျနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးနှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဂပြနျနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Tateshi HIGUCHI ၊ဂပြနျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနညှနျကွားရေးမှူးခြုပျ Mr. Shigeki TAKIZAKI ၊ ဂပြနျနိုငျငံစဈသံမှူး Col.Kei TAJIKA နှငျ့တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ နှဈနိုငျငံဆကျဆံရေးကောငျးမှနျတိုးတကျလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံ၏လှတျလပျရေး အတှကျဂပြနျနိုငျငံ၏ ကူညီဆောငျရှကျခဲ့ မှုမြား၊ ဒီမိုကရစေီလမျးကွောငျးပျေါတှငျ လြှောကျလှမျးရာ၌ ဂပြနျနိုငျငံ၏အထောကျ အကူပေးမှုမြား၊ အာရှဒသေကုနျသှယျရလေမျးကွောငျး လုံခွုံရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြား၊ ရခိုငျပွညျနယျဖွဈစဉျမြားနှငျ့ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးဆောငျရှကျနမှေုအခွအေနမြေား၊ နိုငျငံတျောနှငျ့နိုငျငံသားမြားအတှကျ တပျမတျောမှအကာအကှယျ ပေးဆောငျရှကျနမှေု အခွအေနမြေား၊ ရခိုငျပွညျနယျအတှကျ ဂပြနျနိုငျငံကအကူအညီပေးမညျ့ကိစ်စရပျမြား၊ တပျမတျော နှဈရပျအကွား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု အခွအေနမြေားအားအပွနျအလှနျ ဆှေးနှေးပွောကွားခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ဂပြနျနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးတို့သညျ အမှတျတရလကျဆောငျ ပစ်စညျးမြားအပွနျအလှနျ ပေးအပျကွပွီး တကျရောကျလာကွသူမြားနှငျ့အတူ စုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွသညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr.Taro KONO အား လက်ခံတွေ့ဆုံ